Mayelana NATHI - Zhejiang Yongjie Aluminium Co., Ltd.
Yasungulwa ngo-1994, i-Yongjie yahlelwa kabusha kusuka egameni langaphambilini i-Southeast Aluminium Co, Ltd, yaya enkampanini ehlangene ngo-2011. Njengenkampani kazwelonke esezingeni eliphakeme, u-Yongjie uzinikele ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni ukusebenza okuphezulu, okuphezulu -precision aluminium alloy sheet, coil and foil products, ulwela ukuba ngumhlinzeki wezinto ezisezingeni eliphezulu we-aluminium alloy ezimotweni zezimoto, zamandla amasha nakwezinye izimboni, futhi uyakwazi ukunikeza amakhasimende izixazululo eziphelele ezintweni ze-aluminium alloy.
Le nkampani itholakala eDajiangdong Industrial Cluster Area eHangzhou, futhi ingumnikazi wezinkampani ezingaphansi kwayo ngokuphelele: iZhejiang Yongjie Aluminium Co, Ltd, iZhejiang Nanjie Industry Co., Ltd, i-Hangzhou Zhongcheng Aluminium Co, Ltd, Hong Kong Nanjie Resources Co., Ltd Ngokutshalwa kwezimali okuphelele kwezi-2 billion RMB, indawo yomhlaba engama-260,000㎡, nomthamo waminyaka yonke wamathani ayi-300,000, uYongjie wabizwa ngegama elithi "China Top 10 Aluminium Sheet & Coil Enterprise", eyanikezwa yiChina Nonferrous Metals Fabrication Industry Association ngo-2013.
Ukwakha inkathi entsha ye-aluminium
Ukunweba insimu entsha izinto ezintsha
Ukuba uchwepheshe ekukhiqizeni okuhlakaniphile kwe-aluminium plate, ishidi kanye ne-foil emandleni amasha, ukonga amandla nokuvikelwa kwemvelo.
Ukuba wusizo Ukufuna iqiniso, ukwenza izinto ngokuzimela nokuhlala ugxileZama Ukuqhubeka nokuzama, nokuphikelela ekuthuthukiseniUkuqamba Okushintsha kancane ushintshoI-Trust Trust yenza izinto zibe lula.
Yongjie luhlanganisa ukukhiqizwa, cwaningo, ucwaningo kanye nesicelo eduze, ungumnikazi wesifundazwe ucwaningo ibhizinisi sikhungo kanye workstation postdoctoral futhi ubambisana Beijing University of Science and Technology, Central South University, Zhejiang University, Ningbo Institute of Materials technology & Engineering, Chinese Academy of science and other domestic amanyuvesi adumile, izikhungo zocwaningo, ukuthuthukiswa kukaYongjie kuqhutshwa yimisha. Uma ucabangela amakhasimende njengesikhungo, uYongjie uphikelela endleleni yokuthuthuka esezingeni eliphakeme futhi ulwela ukuba yiGolden Enterprise embonini yokucubungula i-aluminium.
I-Yongjie inezintambo zokukhiqiza zokukhiqiza ezisebenza ngazo zombili zokugoqa okushisayo okuqhubekayo (DC) nokusakaza okuqhubekayo (CC), izixhobo eziyisihluthulelo zonke zingeniswe zisuka eJalimane, e-USA, eSweden nase-Italy. Imikhiqizo emikhulu yaseYongjie isebenza kahle futhi inemba ephezulu ye-aluminium alloy, umucu kanye ne-foil, okusetshenziswa kakhulu emkhakheni we-aerospace, ezokuhamba, amandla amasha, izinto zikagesi nezikagesi, ukwakhiwa okusha nokupakisha, njll. "I-YJL" ihlonishwe njenge-Famous Trade Mark yaseChina. Imikhiqizo kaYongjie ithunyelwe emazweni angaphezu kwama-50 nasendaweni, kufaka phakathi i-USA neYurophu.